HP yadzoka: Inofanira kutumidzwa zita "Compaq" | ECommerce nhau
HP yakangotonga yepasirese PC musika. Iwe pamwe haunzwisise kuti zvinoshamisa sei izvo, saka heino fananidzo yeiyi: Zvakafanana nehozhwa inohwina mujaho uchikwikwidza akanakisa emakwikwi munyika. Iwe unenge uchinyatsoda kutarisa kana ichi chisiri gamba.
Iyi haisi iyo Apple kambani kufumura nyowani iPhone kana iPod Uye nekuputika musika, iyi ikambani yakangodzvanya iyo yekumhanyisa panguva iyo munhu wese paakati aifamba negwara risiri iro, uye nenzira imwechete ini ndinoramba ndakanyarara nezvese izvi kushoropodza.
Kunyange zvichishamisa sezvazviri, kune zvimwe. Ichi zvakare chingori chigadzirwa chitsva chine nzira nyowani, asi vanhu vachiri kuona zita reHP kwese kwese, kusanganisira kufunga kwakaipa uye rakakura rakashata rakashata iro kambani iyi yaive naro.
Uyu muenzaniso wakanaka wekuti nei mucherechedzo uchifanira kufunga kuchinja zita rawo, uye Compaq, ine simba ine mhando pachayo, inogona kuva mhinduro yeHP.
Ndiri kungotya iye HP Performance. Zvaive pachena apo Meg Whitman akataura kuti HP yakanga isina mukana wekubudirira. Aive nechokwadi chakazara kuti maPC nemaprinta aive asvika kumagumo, kunze kwezvikwereti zvakange zvaitwa nekambani iyi.
Iye zvino iyo HP brand haina kana negativity nezvazvo. Uchapupu hweizvi ndiko kutengesa kwavo kwakakwirira kupfuura zvavaimbove vakaita. Dambudziko iri mufananidzo wekambani yavaive vakatakura makore apfuura. Ikozvino, tsika yakanakisa haisi yekupedzisa iyo mhando, asi kuishandura, uye nzira yakanakisa yekuita izvi ndeyokusimbisa ma-sub-brand ayo, akafanana neakaitwa neBM neiyo ThinkPad, isati yatengesa mutsetse wayo kuLenovo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kushambadzira kwenhare » HP yadzoka: Inofanira kutumidzwa zita "Compaq"
Asingakanganise mabhenefiti e-commerce mumakambani